2018 Dzava apera, chinogona kureva chete kuti Krisimasi pedo! Vanhu vachiri haana kugadzirira kuti, asi kune vafambi, zviri kumusoro nguva kuronga rwendo. Kana uri kutsvaka guta zvakanaka kupedza Christmas mu, tine iwe akafukidzwa.
Nyaya ino vachakupai ndandanda yakanaka maguta kupedza Christmas mu. Chii chimwe, isu tichakuudza nezvese zvinonakidza zvinhu iwe zvaungaite ipapo, asi zvakakosha, sei kusvika maguta aya nechitima.
Unogona kushanyira Amsterdam nechitima kubva zvinenge zvapo Europe. The nechepakati chiteshi richibatanidza kuti Paris, muFrankfurt, kweBrussels, London, Zurich, Berlin, Prague, uye zvakawanda. Pane kugara mitsetse nevakawanda uye vamwe vakawanda kumaguta muNetherlands. Saka kana iwe uchida nezvitima zveEuropean unogona kunakirwa akati wandei eakanakisa Maguta Ekushandisa Kisimusi 1 rwendo.
Budapest, guta guru reHungary uye guta rayo rakanaka kwazvo, nderimwe yakanakisisa nzvimbo kupedza Krisimasi iri kuti akawanda zvikonzero. Guta iri paRwizi rweDanube uye inopa zvimwe yevedza chikepe Vatasvi. Unogona kuona zvinenge zvose zvivako enhoroondo kubva murwizi.
Uyezve, uchava kuona dzinokatyamadza Buda kasitoro uye Paramende Building. Kana zvinhu zvaungaita muchando, pane dzakawanda. Kubva akatasva kuti streetcars kuti Skating pamusoro Budapest Park chando Rink, pane nguva dzose pane zvakawanda zvinhu zvekuita pano. wo, usakanganwa kushanyira musika weKisimusi kuVorosmarty Square uye mutambo weKisimusi paBasilica.
Chimwe chezvikonzero chatakatora geneva cheMaguta Akanakisa Ekushandisa Krisimasi blog ndechekuti vadikani veKudya vanofanirwawo kufara sepakutanga kweguta-Christmas musika anopa zvokudya pamusoro nyika kubva zvose. Chii chimwe, unogona kuenda kunotenga Kufamba panguva Street, uye ipapo kushanyira dzimwe rinonyatsooneka varipo. izvi zvinosanganisira ari Palace of United Nations, St Pierre Cathedral, Water Jet, uye zvakawanda.